साहित्यकार, आन्दोलन र बहस- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
साहित्यकारबाट नागरिक आन्दोलन आरम्भ हुनुको अन्तर्यमा यसको सिर्जनशील पक्ष छ । यसपालिको नागरिक आन्दोलनको प्रकृति स्वतःस्फूर्त किसिमले दिनदिनै परिभाषित हुँदै गएको छ ।
फाल्गुन ८, २०७७ अभि सुवेदी
यो लेख तयार पारेको बेलासम्मको नागरिक आन्दोलनले क्रमशः उठाउँदै गएको प्रसङ्ग छ यहाँ । इतिहासले भुलेका विषयलाई उठाउनुपर्छ भनेको छ, यो आन्दोलनले । उठ्तै जानेछन् । हिजोका बृहत् आन्दोलनको बहसको केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू थिए । तिनको पुनरुत्थान गर्नु, तिनलाई दलको आकार दिनु र एउटा संविधानभित्र राखेर तिनलाई देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मा दिनु ती आन्दोलनहरूको मुख्य लक्ष्य थियो ।
त्यो स्वाभाविक दायित्व थियो जुन दिए जनताले, दियो संविधानले । संघर्ष र बलिदान भए । त्रासद क्षणहरू आए अनि केही वर्ष बिते । ती दलहरूले त्यो बृहत् आन्दोलनले दिएको अभिभारा पूरा गरे कि गरेनन् खासै बहस भएन । तर, आन्दोलन आफैंमा उपलब्धि थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनहरू सुरु भए । संविधान निर्माणमा पनि भूमिका भएका र जारी गर्ने केही मित्रहरूले त्यसको समर्थन गरेको वाचाल थियो । नेपालको इतिहासमा स्मृति अत्यन्त छोटो हुन्छ । हिजोको ‘ट््याजेडी’ बिर्सिने क्रम सुरु भयो । उपहासपूर्ण मोडमा त्यो प्रवेश भयो । बिर्सिने र बिर्साउने मिले । त्यो ‘एम्नेसिया’ वा विस्मृति नामले छलफल गरिन्छ । त्यो एम्नेसियाको चरित्र लगभग सबै राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापमा देखिन थालेको छ । उनीहरूको नीति र कार्यक्रममा देखिएको अनिश्चयको कारण त्यही विस्मृतिको प्रभाव हो । तर मानिस आन्दोलित भए । पहिलो आन्दोलन त्यही नेकपाभित्रकै नेताहरूबाट भयो । नेतागणका एउटै धारणा नभए पनि नेपाली कांग्रेसबाट पनि विरोधका जुलुस र भाषणहरू आए । तर, अर्को नागरिक आन्दोलनको आरम्भ भयो । नागरिक समाजले पहिलो पार्टी नेतृत्वको आन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । तर त्यसको मूल चरित्र उभार सिर्जना गर्नु र मार्गदर्शन गर्नुमा थियो जुन त्यही रूपमा रह्यो र लगभग इतिहास भयो ।
भर्खरै सुरु भएको नागरिक आन्दोलनले त्यो विगतको जरो समायो । त्यो बिर्सेको कालखण्ड, ती दल र सरकारले भुलेका प्रतिज्ञा, ती जानीजानी अवज्ञा गरेका जनतासँगका मौन र वाचाल सम्झौता अहिले फटाफट बाहिर आउन थालेका छन् । यो नागरिक आन्दोलनको आरम्भ सरल, दृढ र सिर्जनशील देखियो । एक जना युवा पुस्ताका लेखक युग पाठकले सानै स्केलमा यो आरम्भ गरे । यी युग पाठकले लेखेको उपन्यास ‘उर्गेनको घोडा’ को कलेवर जनताको जीवन, मिथक, यथार्थ र संघर्षले बनिएको छ ।
त्यो नागरिक आन्दोलनमा साहित्यकारहरू र नाट्यकर्मी आए । शुभ्र केश लिएर दुब्लो ज्यान तर तेज निस्सृत गर्ने खगेन्द्र संग्रौला आए । खगेन्द्र भाइलाई देख्ता फ्रान्सेली लेखक जँ पोल सार्त्रको सम्झना हुन्छ, मलाई । सार्त्रले फ्रान्समा उठेका कुनै पनि नागरिक आन्दोलनलाई नैतिक र दैहिक समर्थन दिन छोडेनन् । सन् १९६८ को फ्रेन्च क्रान्ति, त्यसको अघि र त्यसपछिका सबै आन्दोलनमा तिनको सहभागिता थियो । पछि उमेर र स्वास्थ्यको कारणले अलिक गलेपछि उनकी आजीवन मित्राणी सिमो द बुभ्वाले उनको सक्रियतालाई लिएर, पुग्यो नि, आराम गर्ने होइन अब ? भनेको संस्मरणलाई चिन्ताको रूपमा राखेकी छन् । खगेन्द्र भाइको कथा त्यस्तै हो ।
यो नागरिक आन्दोलनमा पल्पसा क्याफे उपन्यासका लेखक नारायण वाग्ले सुरुमै निस्के । प्रचण्ड–नेपालहरूको सभामा गएर हिंसाका कुरा नगर, शान्ति र नागरिक शक्तिका कुरा गर भनेर गर्जे यी लम्बू ज्यानका लेखक । कविताबाट विद्रोह बोल्ने भूपाल राई आए । अर्का उपन्यासकार सञ्जीव उप्रेती आए । तिनको पछिल्लो उपन्यास हंस एकाध महिनापछि हुने सार्क लेखक सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा अहिले पढिरहेको छु । रङ्गमञ्चका अग्रगामी निर्देशक घिमिरे युवराज आए । अरू निकै साहित्यकार, अभियन्ता र पत्रकारहरू छन् । यहाँ केही नाम मात्र लिएको हुँ । साहित्यकारबाट नागरिक आन्दोलन आरम्भ हुनुको अन्तर्यमा यसको सिर्जनशील पक्ष छ । यसपालिको नागरिक आन्दोलनको प्रकृति स्वतःस्फूर्त किसिमले दिनदिनै परिभाषित हुँदै गइरहेको छ । नेपाली अहिंसात्मक आन्दोलनका एकल संवाहक डा. गोविन्द केसी आए । यिनको विषयमा यही पत्रिका र ‘काठमाडौं पोस्ट’ मा धेरै लेखिसकेको छु, दोहोर्‍याउन चाहन्नँ । तर, डा. केसीको सन्देश प्रस्ट छ । आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिहरूको पालना भएन । सबै राजनीतिक दलका सरकारहरूले जनताको चाहना र समर्पणको दुरुपयोग गरे, अब त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने उनको सन्देश हो । मोहना अन्सारीले मानवअधिकारको उद्घोष गरिन् ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालले माघ २२ मा सरकारले बाटैमा रोकेको नागरिक आन्दोलनको जुलुसमा नागरिक हुनुको अर्थ, त्यसको शाश्वतता र शक्तिको व्याख्या गर्दै भने, हामी राज्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने नागरिक होइनौं । उनले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थपे, राजनीतिको धेरै फोहोर थुप्रिएको छ, संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै त्यो फोहोर सफा हुँदैन ।
अब केही राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएका विषयको छलफल गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । भुक्तमान भोगिबसेका जनताको वास्ता नगरी आन्तरिक झगडाको मात्र चिन्ता गरी बसेका अनि इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड नष्ट गरी आएका ठूलो दल नेकपाका नेताहरूबाटै तथाकथित ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह जन्मे ।
अहिले नारायणहिटीको आँगनदेखि चौर, गल्लीर घुम्तीहरूमा तिनीहरूकै सभाहरू हुँदै छन् । नाट्यकर्मी युवराज घिमिरेलाई यो नाटकीय लागेको छ । यी दुईलाई मिलाउन अर्को समूह बनाएर लाग्ने काममा अर्का कामरेड वामदेव गौतम निस्के । अब त्यो ठूलो नेकपा दल त्रिकोणात्मक हुने बाटोमा छ । यस्तो बेलामा मैले सम्झिने कविता नै हो । कवि कुन्दन शर्माले एउटा वाचाल कविता लेखेकी छन्, निकै पहिले । मेरा कविताहरू (२०४५) नामको संग्रहमा प्रकाशित ‘ठूलो त्रिकोण––ईश्वर मरेको संसारमा’ शीर्षक शर्माको त्यो कविता सिङ्गै मेरो स्मृतिमा बल्झियो । कुन्दन शर्माको कविता बोल्छ ट्ठ ‘त्रिकोणको यो नाटक/ दुःखान्त अथवा सुखान्त हो?/ कोतिर हेरेर भनूँ म/ यहाँ तीनैथरी छन्’ । (१६) । मार्क्सको दुःखान्त र सुखान्तको कुरा यहाँ पनि दोहोर्‍याउँछौं । यो ईश्वर मरेको संसार कस्तो छ त्यो त्रिकोणमा ? गहिरिएर हेर्नुपर्छ । उन्नाइसौं शताब्दीको सामाजिक क्रान्तिलाई लिएरअठारौं ब्रुमेरमा मार्क्सले भने, ‘कविता विगतबाट होइन भविष्यबाट उघाएर ल्याउनुपर्छ’ । नेपाली राजनीतिमा अहिले आएको अवस्थाको कारण शासकीय दल र सरकारले जनताले दिएको मतबाट पाएको संसद्लाई जनताको हित गर्ने ऊर्जावान कविताजस्तो रूपमा होइन, सोझो भौतिक फाइदाका निम्ति प्रयोग गरिने माध्यम ठाने । सबै ऊर्जा र सिर्जनाको स्रोत संसद्लाई बन्दी, शक्तिको माध्यम र पंगु बनाउने काममा कार्यकारीहरू लागे । अहिलेको समस्याको जरो त्यही हो । आन्दोलन कार्यकारीसँग गरिन्छ, तर तिनले दुरुपयोग गरेको सबभन्दा ठूलो ऊर्जा र शक्तिको स्रोत संसद्को मुक्ति त्यसमा नपर्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेस ठूलो विरोधी दल हो, अनि अर्को राजपा हो । नेपाली कांग्रेसको यो कमिनिस्टमय त्रिकोणात्मक संसारमा के भनाइ छ, के स्थान छ त अहिले ? नेपाली कांग्रेसकै नेता गुरुराज घिमिरेले पुस्तान्तरको चिन्तालाई लिएर यसरी लेखे, ‘कांग्रेसभित्रको युवापंक्ति एक प्रकारले बाल संन्यासीजस्तै किशोर वयमै राजनीतिमा लागेको उर्वर शक्ति हो । ...राज्य र पार्टीको भूमिकामा बस्नुलाई जागिर पाएझैं मात्र ठान्नु अराजनीतिक बुझाइ हो र कम्तीमा बीपी कोइरालाको पार्टीमा यो कसैलाई सुहाउँदैन’ । (नयाँ पत्रिका, २३ माघ, २०७७) । डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिक समाजसहित सबैको संयुक्त आन्दोलनको आह्वान गरे । दलहरूको अहिले संयुक्त आन्दोलनमाथि विश्वास घटेर गएको देखियो । यो परिवर्तित मनस्थितिले धेरै कुरा भन्छ । अर्कोतिर जनताको राजनीतिक दलहरूसँगै मोह भंग हुने गति पनि तीव्र देखिएको छ । भोलि त्यसले ल्याउने समस्या झन् जटिल हुनेछ ।
यसपालिको नागरिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र विचारक र विद्वान्हरूले छोटा भाषण, लामा अन्तर्वार्ता र लेखहरूद्वारा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस अघि सारेका छन् । त्यो हो, नागरिक आन्दोलनको अलग र शाश्वत चरित्र बनाउने । ती भन्दै छन्, दलहरूका क्रियाकलाप र तिनले अपव्याख्या गरेको संविधानको मर्मले भन्छ, अबको नागरिक आन्दोलनले यी सबै कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर सबभन्दा मुख्य कुरा यो एउटा जागरुक चेतनाको नाम हो जुन दलका नीति, तिनका आह्वानलाई लिएर मात्र चल्दैन । अनि यो नित्य चलिरहनुपर्छ ।
यस्ता सतत जागरुकता रहेनन् भने नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामाथि प्रहार भइरहन्छन्, विचार विविध छन् तर मूल उद्देश्य एउटै छ भन्ने कुरा तिनका लेखमा आए । यस विषयमा मैले भाष्कर गौतम, आहुति, उज्ज्वल प्रसाईं, सञ्जीव उप्रेती, राजेन्द्र महर्जनका बहसहरू पढें । राष्ट्रिय सीमान्तकरणविरुद्ध अभियानका दुई युवा अभियन्ता सीएन थारू र आरके तामाङको नागरिक आन्दोलनले सीमान्तकरणको मुद्दालाई लिनुपर्छ भन्ने विचार पनि पढें । सबै पढ्दा र सुन्दा अग्रणी मार्क्सवादी साहित्य दार्शनिक फ्रेडरिक जेमिसनको इतिहासको ‘राजनीतिक अवचेतना’ सिद्धान्त सम्झें । नेपालमा विगतले पूरा नगरेका प्रतिज्ञा, सरकार र दलहरूले दिएका धोका भुक्तमान, सबै दमित विषय जुर्मुराएर यो नागरिक आन्दोलनका एजेन्डा हुन आउनेछन् । अहिलेको चुनौतीले विद्रोही तरंगहरू जन्माएका छन् । ती कति इतिहासबाट जन्मेका हुन्, कति समकालिक हुन् र शाश्वत हुन् यो नागरिक आन्दोलनले केलाउनेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १०:५०
कमिनिस्टमा इतिहास लेखन समस्या
के नेपालमा शक्तिमा आउने कमिनिस्टको मानवीय र लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदैन ? समाजले सम्मान र माया गरेका साहित्यकार, कलाकार र चिन्तकहरूलाई पानीका फोहोराले उफारेर, त्यसपछि लाठी प्रहार गरेर घाइते बनाएको घटनाले हामी मर्माहत र आक्रोशित भएका छौं ।
माघ १७, २०७७ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — अहिले नेपालमा धेरैजसो समस्या राजनीतिसँग गाँसिएका छन् । पछिल्लो समयमा आएको समस्या भनेको नेपाली दलहरूले इतिहासलाई कसरी व्याख्या गर्छन् र कसरी त्यसलाई हेर्छन् भन्ने नै हो । यस लेखमा नेपाली कमिनिस्ट पार्टीका समस्याको प्रसङ्ग छ ।
खासगरी साहित्य र कलासँग जोडिएका इतिहास आफ्नो चाखका विषय भए पनि यहाँ अहिले पछिल्ला राजनीतिक घटनाले उठाएका विषयहरूलाई छलफलको आधार राखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरू र तिनका कामले इतिहास बनिने गर्छन् । तिनले ल्याएका भ्रम, तिनले हासिल गरेका उपलब्धि र तिनले सिर्जना गरेका समस्या सबैले इतिहास बनाउने कामलाई प्रभावित गर्छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने, शक्तिको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने अनि तिनका कामले जनता र राज्यका आकारप्रकारमा नै प्रभाव पार्ने हुनाले तिनीहरू पनि इतिहास निर्माणसँग जोडिन्छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूका नीति र आन्तरिक शक्ति युद्धले त्यो चेतनालाई गौण बनाइदिएका छन् ।
खासगरी नेपालको दुईतिहाइ मत पाएर सरकार र सत्तामा आसीन नेकपाभित्र आएका हलचल अनि तिनले पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधानले ल्याएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ल्याएका चक्रवातहरूले नेपाली इतिहास लेखन र बुझाइमा निकै समस्या ल्याएका छन् । नेपालको अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको इतिहास बुझ्ने व्याख्या गर्ने समस्याको पाटो पनि त्यस्तै किसिमको देखिएको छ । तर, यहाँ कमिनिस्ट दलहरूको वरिपरि केन्द्रित भएर केही बुझाइ, प्रसङ्ग र अध्ययनहरूलाई राखेर छलफल गरिएको छ ।
इतिहासको व्याख्या गर्नेहरूका केही आफ्ना शैली हुन्छन् । तिनलाई बुझ्न मैले आफूलाई मन पर्ने र विश्वास लाग्ने, स्वतन्त्र चिन्तन भएका एक इतिहासकारलाई सम्झें । ती हुन् परिचित इतिहासकार डा. महेशराज पन्त । उनका बृहत् विषयका आलेखहरूको अध्ययन र प्रयोग गर्ने अनेकौं ठाउँ छन् । तर, यहाँ मैले पहिले नै सङ्कलन गरेर राखेको अनि ब्रिटिस इतिहासकार मित्रलाई पनि सेयर गरेको कान्तिपुर (१२ फागुन २०७४) मा प्रकाशित ‘साम्यवादी नजरमा नेपालको इतिहास’ शीर्षक लेख फेरि पढें । पन्तले त्यस महत्त्वपूर्ण लेखमा दुई कुराको बोध गराएका छन् ।
इतिहास, त्यसमा पनि राजनीतिक इतिहास लेख्दा समय, प्रसङ्ग र सन्दर्भमा राखिएका ग्रन्थहरूको आधिकारिकतामाथि जोड दिनुपर्ने कुरा पहिलो छ । दोस्रो, इतिहासका घटना र परिस्थितिको व्याख्या गर्दा त्यसलाई आफ्नो सिद्धान्तअनुसार मोडेर राख्नु हुँदैन, त्यसको सत्यतालाई राख्नुपर्छ । आखिर मार्क्सले पनि त्यही भनेका हुन् । दृष्टिकोणअनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ, तर सत्यलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन ।
नेपाली कमिनिस्ट इतिहासका केही ग्रन्थहरूलाई लिएर पन्तले अत्यन्त आवश्यक समालोचना गरेका छन् । अहिले नेपाली कमिनिस्टहरू इतिहासको व्याख्या गर्ने होडमा लागेको बेला यो महत्त्वपूर्ण सल्लाह हो ।
अनि दोस्रो मोटो किताब ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ग्रन्थ–१’ (२०६९ माघ) फेरि पढें । यो किताब मलाई पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर ‘अभ्यास’ ले त्यही साल हिमालयन जाभा कफी हाउसमा आएर समीक्षाका निम्ति भनेर दिएका थिए । मैले म यसका निम्ति उपयुक्त व्यक्ति होइन भन्दा उनले भनेका थिए, कुनै राजनीति गर्ने व्यक्ति वा राजनीतिका विद्वान्भन्दा एउटा साहित्यकारले यसलाई कसरी हेर्ने रहेछन् भनेर जान्न दिएको हुँ । मैले विष्टको दृष्टिको मनमनै प्रशंसा गरेको थिएँ ।
राजनीतिक इतिहासको व्याख्या साहित्यिक दृष्टिले गर्ने चलन बलियो छ । त्यसमा पनि नवऐतिहासिकतावाद अथवा ‘न्यु हिस्टोरिसिज्म’ ले राजनीतिजनिन इतिहास हेर्न अनेकौं दृष्टिहरूको प्रयोग गर्छ । मैले स्वतन्त्र किसिमले कान्तिपुर (५ जेठ २०७१) मा यसको समीक्षा गरें । यो ग्रन्थको सुरुको आलेख सन् १९४९, सेप्टेम्बर १५ मा नेपाल कमिनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि प्रकाशित पहिलो पर्चा हो ।
पार्टी स्थापित भएपछि घोषणापत्र जारी गरियो । त्यसमा नेपालको ऐतिहासिक विवेचना छ, जुन कोतपर्बदेखि समेटिएको छ । शक्तिको इतिहास छ । यस ग्रन्थमा अनेकौं आलेख छन् । त्यसमा महामन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत २०४५ सालमा नेपाल कमिनिस्ट पार्टी (मशाल) को केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत र पारित पाठ पनि छ । त्यसमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको एउटा कुराको आज पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका विचारका विगतहरूको मञ्चमा नाटक चलिरहेको बेला प्रसङ्ग ल्याउनु सान्दर्भिक छ । मैले त्यो ग्रन्थको समीक्षामा लेखें, ‘प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको यो वाक्य सान्दर्भिक छ— यस अर्थमा झापाली गुट र विघटित अल्पमत पक्षले चुनावी बाटो
पक्डिसकेकाले उनीहरूद्वारा सशस्त्र संघर्षका कुरा गरिए तापनि तिनको कुनै अर्थ र औचित्य रहन्न ।’ संवत् २०१० माघमा प्रथम पार्टी महाधिवेशनमा पार्टी महासचिव मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा एउटा वाक्य चाखलाग्दो भेटिन्छ, ‘कमिनिस्ट पार्टी नेपालमा समाजवाद निर्माणको कुरा गर्दैन, किनभने यो अनुभव गर्दछ कि देशको अहिलेको परिस्थिति यस्तो कार्यक्रमको निम्ति उपयुक्त छैन ।’ त्यस्तै ०३१ सालमा मोहनविक्रमले ‘तुरुन्त जनवादी सरकारको स्थापनाका लागि नारा दिन परिस्थिति तयार भएको छैन’ भनेका छन् । बारम्बार दोहोरिने त्यो स्थगनको दर्शनलाई समयअनुसार बुझ्नुपर्छ । बीचका राजनीतिक उथलपुथललाई हेरेर हिजोका दस्तावेजहरूको ऐतिहासिकतालाई व्याख्या गर्नुपर्छ ।
तर, यो ग्रन्थमा संकलित प्रतिवेदन र आलेखहरूको व्याख्या गर्दा अहिलेको राजनीतिले उठाएको अर्को प्रश्न आउँछ । त्यो हो दस्तावेज एकातिर अनि पार्टी चलाउनेको नीति अर्कोतिर भन्ने ऐतिहासिक अनुभव । कान्तिपुरकी बिनु सुवेदीको ‘नेकपामा २०१४ सालको पुनरावृत्ति’ शीर्षकको समाचार विश्लेषण (माघ ९, २०७७) ले लोकेन्द्र विष्टको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेर्ने एउटा अर्को दृष्टिकोणको इतिहास राखिदियो ।
अधिवेशनमा पारित भएको दस्तावेज एउटा अनि पार्टीको नीतिको त्यसमा प्रभाव नहुने न्यारेटिभले इतिहास लेखनकै पद्धतिको एउटा अर्कै चित्रण गरेको देखियो । बिनुको रिपोर्टिङको सार र निष्कर्ष छ, ‘जसरी २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालको नीति पारित भयो तर महासचिव रायमाझी बने, त्यसपछि नीति प्रकाशन गरिएन र केही वर्षमै नेकपा फुट्यो, २०७१ सालको नयाँ महाधिवेशनबाट केपी ओली पार्टी अध्यक्ष चुनिए पनि पारित भएको माधव नेपालको प्रतिवेदनमाथि कहिल्यै छलफल गरिएन र अहिले नेकपा फुटेको छ ।’ बिनुको निष्कर्षले भनेजस्तो आधारमा यी दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने हो भने अरू के–के देखिएला त्यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ ।
यो घटनाका ऐतिहासिकी हेर्ने दृष्टिलाई अझ व्यापक बनाउने हो भने नेपालमा कमिनिस्ट पार्टीको इतिहासभित्र धन्द्याउन बाँकी रहेका अरू विषयहरूतिर जानुपर्ने हुन्छ, जुन इतिहास र राजनीतिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्ने विद्वान्हरूले गर्लान् नै । तर, त्यतातिर खासै केन्द्रित भएर, भित्र पसेर गरिएका विश्लेषणहरूको अलिक कमी नै भएको देखिएको छ । विष्टले कुनै कवि साहित्यकारले यो इतिहास लेखून् भन्ने पक्कै चाहेका थिएनन् ।
उनको भनाइ थियो र उनको विश्वास थियो— यत्रो ठूलो पार्टीको यति लामो इतिहासमा केही सिर्जनशील कुराको खोजी हुनुपर्छ । यो दल नेपाली जनता, विपन्न र सीमान्तकृत नरनारीहरूको नाममा बनिएको हुनाले यसका घोषणा र नीतिहरूमा मानवीय, सिर्जनामूलक अनि कल्पनाजन्य विषय र दृष्टिहरूको आवश्यकता छ भन्ने तिनको विश्वास थियो भन्न सकिन्छ । कल्पनाजन्य सिर्जनशील विश्वास मार्क्सवादको ठूलो सामर्थ्य हो । युटोपियाली कल्पना, राज्य वैलाउँदै गएर मुक्त मानिसहरूको राज्य कायम हुने मार्क्सको सिद्धान्त इतिहासको त्यही सिर्जनशील काल्पनिकी हो । अहिले नेपाली कमिनिस्टहरूमा अभाव भएको कुरा त्यही संस्कृति र काल्पनिकीको मर्यादा हो भन्ने कुरा दिनदिनै उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाष्य र मञ्चमा उद्घोष गर्ने बोलीहरूले देखाउँछन् ।
सिद्धान्तका घोषणाहरूले काम निर्देशित नहुने अनि शक्तिका लिलिपुट काल्पनिकीले सबैका विचार निर्देशित हुने संस्कृतिको विकास भएको अवस्था हो अहिलेको । त्यसको कारण एउटा अत्यन्त भौतिक संस्कृतिको प्रभाव हो । त्यो धन र उपभोग गर्ने मनोग्रन्थीको पुँजीवादी संस्कार बन्दै गएको अवस्था हो । पार्टी एउटै हो, हामी फुटेका छैनौं भन्ने मनस्थिति र अवस्था एकातिर छ भने हामी आ–आफ्ना सपना र आकांक्षाले निर्देशित छौं र त्यसको मात्रै रक्षा गर्छौं भन्ने भावना छ अर्कोतिर ।
बन्द कोठाहरूमा हिजोदेखि आपसमा झगडा गरिरहने, देश कोभिडको प्रहारले आक्रान्त भएको, किसान आफ्नो उखुको दाम नपाएर राजधानी धाउँदा जाडोले मरेको, अनि फोकलोर मात्र भएको देशको बोध गरेर जनताले महाभिनिष्क्रमण गरेका घटनाले नछुने अनि एक्कासि फुटेर निस्किने र वाचाल भएर अनेकौं भाष्य प्रयोग गरिबस्ने भीमकाय कमिनिस्ट दलहरूको व्याख्या इतिहासकार र राजनीतिशास्त्रीहरूले गर्लान् नै जुन मजस्तो साहित्य लेख्ने व्यक्तिको सामर्थ्यबाहिरको कुरा हो ।
तर, अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कार ह्रासोन्मुख हुँदै जानु र शान्ति र सिर्जनाको वातावरण पनि दिनदिनै बिग्रँदै जानु हो । इतिहास भत्काउँदा सिर्जनशील हुनुपर्दैन, तर बनाउँदा अत्यन्त सिर्जनशील, संवेदनशील र अध्ययनशील पनि हुनुपर्छ भन्ने यस कुराको मूल सन्देश हो ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७७ १०:४९